Brightwin - Brightwin nkwakọ Machinery (Shanghai) Co., Ltd.
na ịpị igwe
Katọn mbukota igwe
Anyị bụ ndị a adịchaghị emeputa nke nsacha igwe, na-ejuputa na ígwè ọrụ, capping igwe, labeling igwe, na dị iche iche na mbukota igwe etc nri, Chemicals na pharmaceuticals ọrụ. Anyị OA na ISO9001: 2008 asambodo obi sie na ị na anyị na-enye adịchaghị mma equipments na ị pụrụ ịtụkwasị obi. All anyị ígwè ọrụ na-ahaziri izute ọ bụla ahịa 'choro.
Quality bụ omenala
Anyị ji onwe anyị na-enye ndị ahịa anyị na ndị kasị mma na-enwetụbeghị ụdị ọrụ. Anyị àgwà akara otu insures na-abata na mmiri na oku akụrụngwa izute ma ọ bụ gafere ahịa 'chọrọ. Onye ọ bụla igwe a na-anwale megide ahịa si samples tupu nnyefe.
Brightwin bụ onye ndú na ahịa nkwado
Anyị ahịa ọrụ otu oru na-arụ ọrụ nke ndị ọkachamara na-adị njikere mgbe nile zaa ahịa ajụjụ na-edozi nsogbu tupu ma ọ bụ mgbe ahịa.
N'ihi na ndị a, anyị na ígwè ọrụ e naanị ka North America, South America, Europe, Middle East, Africa, Asia na Australia wdg Anyị nwere obi ike na-gị pụrụ ịtụkwasị obi soplaya na China.
Na onye ndú nke general manager onye bụ agadi engineer na ihe karịrị afọ 20 'ahụmahụ, Brightwin nwere 4 agadi engineer, 5 n'etiti injinia na 40 ahụmahụ technicians. N'otu oge ahụ, e nwere a ahịa-centric sales otu; ọtụtụ n'ime ndị na ere ọrụ Brightwin ihe karịrị afọ 3; ndị a nwere ahụmahụ ere nwere ike na-enye gị ọkachamara tupu ahịa ọrụ.
Brightwin mgbe-sales ọrụ otu egwuregwu nwere ike na-enye echichi na debugging na saịtị. Anyị gara America, Middle East, Africa, New Zealand na ọtụtụ mba ndị ọzọ iji wụnye igwe anyị ahịa.
RM 1003, Nke 1399, Jinqiao Rd, Shanghai China
Call Anyị Now (WhatsApp):
© Copyright - 2010-2019: All Rights echekwabara. Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile
Bouillon Cube Machine , Bouillon Cube Kechie Machine, Bouillon Cube Ime Machine ,沪ICP备18018895号-1